Soo dejisan AIMP 2.50.332 – Android – Vessoft
Qeybta: Ciyaartoyda warbaahinta
Bogga rasmiga ah: AIMP
AIMP – ciyaaryahan awood badan kaas oo ay taageertaa qaabab maqal ah oo caan ah. Software waxa uu leeyahay muuqaalada sida abuuridda of Playlists, saldhigyo saleynayo playback of kuwan raadkaygay, tirtirka faylasha, oo intaa dheer oo muusiko ah ka SD-cards, dhollacadaynaysa dhexeeya tareenka iwm AIMP si toos ah ogaadaa sida ey macluumaadka tags iyo doorteen harag ah oo kala duwan walxuhu. Software The kuu ogolaanayaa inaad Customize tayada dhawaqa ee files audio isticmaalaya barbaraha multiband ah. AIMP ka kooban qalab si ay u maareeyaan ciyaaryahanka la headset iyo saldhigyo widget daaha qufulka.
Taageerada tiro badan oo ah qaabab maqal ah
Meeshay of Playlists
Helitaanka barbaraha multiband
Widgets u desktop iyo daaha qufulka
Soo dejisan AIMP
Faallo ku saabsan AIMP
AIMP Xirfadaha la xiriira
KMPlayer – mid ka mid ah ciyaartooyda ugu caansan in lagu ciyaaro feylasha warbaahinta. Softiweerku wuxuu leeyahay barnaamijyo badan oo kala duwan oo loogu talagalay dib u ciyaarida tayada leh tiro badan oo qaabab badan oo warbaahin ah.
BSPlayer – ciyaartoy dhammaystiran oo u ciyaaro faylalka maqalka iyo muuqaalka ah. Softiweerku wuxuu ka kooban yahay set badan oo codec ah si loogu daawado fiidiyowga qaabab badana waa u fiican yahay ciyaarista muusikada.
Qalabka Muusikada – muyuusig muusig ku habboon oo taageero ka helaya qaabab caan ah. Softiweerku wuxuu ka koobanyahay isbarbardhig awood badan wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad sameyso raadinta deg degga ah ee faylasha muusikada.
Qalabka Qalabka Sareeya – Qalabka muusikada ee shaqeynaya oo ka kooban 11 jaangooyooyin dhawaaq oo caadi ah iyo 5 barbardhac u eg oo leh mitiryo aad u badan.
Hola Launcher – softiweer sahlan iyo barnaamijyo badan oo lagu beddelo interface iyo in lagu xoojiyo aaladda Android iyada oo la raacayo doorbidyada shaqsiyadeed.
FrostWire – qalab loo soo dejiyo oo la wadaago feylasha shabakadda BitTorrent. Software-ka wuxuu bixiyaa raadinta deg degga ah ee faylasha waxaana kujira fariin ku dhisan gudaha.